Nin Soomaali ah oo 2 sanno & Bar Xabsi ah Lagu Xukumay Markuu weeraray gabar 10 jir ah
Super Market laga dukaameysto oo ku yaal magaalada Bristol ee dalka Boqortooyada Ingiriiska, ayaa lagu qabtay nin Soomaali ah oo magaciisa lagu sheegay Amiin Xuseen markii lagu eedeeyey inuu la baxsan rabay gabar Soomaali 10 jir ah oo la socotay hooyadeed iyo walaasheed, waxaanna ninkaas lagu xukumay 2 sanno iyo bar xabsi ah, sidaas waxaa qoray Wargeyska Daily Mail.
Ninkan Soomaaliga ah oo loo diiday codsigiisa magangelya-doonka ah, isaga oo dalka Ingiriiska soo galay sannadkii 2009.
Ninkan Soomaaliga ah waxaa lagu soo eedeeyey dambiyo gaaraya 20, oo ay 3 ka mid ah ahaayeen isaga oo doonayey inuu kufsi geysto.
Xuseen ayaa markii uu Super Market-ka,Tesco, ka baxayey ku yiri ilaaladdii dhismaha, “Haddii aan Soomaaliya ku laabto qof kasta oo British ah oo aan arko waan dilayaa”.
Wargeysku waxaa kaluu sheegay in ninkan la isku dayey in si qasab ah Soomaaliya loogu masaafuriyo hase ahaatee ay suurtagali kari weyday, maadaama Soomaaliya aysan aqbaleyn dadka sida qasabka ah lagu soo masaafuriyo in laga dejiyo.
Dalalka Yurub iyo Waqooyiga Ameerika Mareykanka waxaa ku soo badanaya dhalinyarada Soomaalida oo marka ay soo wajahaan caqabadaha nololeed ee dalalkaasi ka jira, si toos ah u dhex dabaasha badweynta dambiyadda, daroogada, dhaca & falalka kale ee gurracan, waanna taasi ka dhashay in 10-kii sann-ee u dambeeyey ay da’yarta Soomaalida noqdeen kuwa ku soo badanaya xabsiyadda.